၀ င်းဒိုး ၇ အတွက်ထောက်ခံမှုအဆုံးသတ်ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ | Gadget သတင်း
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းက Windows XP ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သော Windows7ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ နာရီအနည်းငယ်ကြာလျှင် Microsoft သည် Windows7၏ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုသူများအားမည်သည့်ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုမဆိုပေးသည်။ သူတို့ဟာမည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်ကွန်ပျူတာလေးခုလျှင်တစ်လုံးတွင် Windows7တပ်ဆင်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကဤသတင်းသည်သန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများအတွက်၊ ၎င်းသည် Windows XP တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ချိန်ချိန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ခွေးတစ်ကောင်၏ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ အရာအားလုံးအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိတယ်။
1 Windows7အတွက်အထောက်အပံ့ကဘာလဲ
1.1 ¿ Que puedo hacer?
2 Windows 10 ကိုအခမဲ့ရယူပါ
2.2 installation မီဒီယာကိုဖန်တီးပါ
4 operating system ကိုပြောင်းလဲပစ်
Windows7အတွက်အထောက်အပံ့ကဘာလဲ
Windows7၏အိမ်သုံးသုံးစွဲသူများသည် သူတို့ကနောက်တဖန် update ကိုမဆိုမျိုးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ယခုမှ စ၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအားနည်းချက်အသစ်များကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကထွက်ရှိပြီးကတည်းကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသော bug အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိပါက၎င်းသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းမှတစ်ဆင့်လည်းဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်ဗားရှင်းအသုံးပြုသူများ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ၂၀၂၃ အထိဆက်လက်အထောက်အပံ့များကိုဆက်လက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီများသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများမရှိဘဲ Windows 10 ကိုလည်ပတ်နိုင်သောခေတ်မီစက်များအတွက်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ဟောင်းများကိုအသစ်တဖန်ပြန်လုပ်ရန်အချိန်လုံလောက်မှုရှိပါသည်။
အမှန်တကယ်, အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသောကွန်ပျူတာများ၏ ၅၀% ကျော်တွင် Windows 50 ကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောကောင်းကျိုးများအားလုံးကြားမှ Windows7အသုံးပြုသူများအကြားလွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းအသစ်ကိုမွေးစားသောအခါမိုက်ကရိုဆော့ဖ်အတွက်လွယ်ကူအောင်မလုပ်နိုင်သောအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာငါပြောခဲ့သလိုပဲဖြစ်ရပ်အားလုံးအတွက်၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးကိစ္စတွေအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိတယ်။ Microsoft က Windows7ကိုထောက်ပံ့မှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် အသင်းပေါ် မူတည်၍ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်လိုအပ်ချက်များ။
Windows 10 ကိုအခမဲ့ရယူပါ
သင့်ကွန်ပျူတာဘယ်လောက်အသက်ရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး Windows 10 နဲ့သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မယ်။ Windows 10 installation tool ကလိုက်ဖက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အကောင့်သို့ယူလျှင် Windows 10 သည် Windows7ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်သင့်ကွန်ပြူတာပေါ်တွားသွားရင်မှဘာပြproblemနာမှမရှိဘူး။
Windows 10 ၏ပထမနှစ်တာကာလအတွင်း၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် ၀ င်းဒိုး ၇ နှင့် Windows 7.x လိုင်စင်ရှိသောအသုံးပြုသူများအားလုံးကိုအခမဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ခွင့်ပြုခဲ့သည် Windows 10 သို့တစ်နှစ်ကုန်သွားသည်နှင့်အချိန်အကြာတွင်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖွင့်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့အားထိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုထပ်မံပေးခဲ့သည်။
Support ၏အဆုံးနှင့်အတူ Microsoft သည်အစပိုင်းတွင်အကန့်အသတ်မရှိပြန်လည်အသုံးပြုပြီးသင်၏ Windows7ကွန်ပျူတာကို Windows 10 သို့လုံးဝအခမဲ့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာကကွန်ပျူတာထဲမှာပြင်ပ drive တခုမှာသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကို backup ကော်ပီတခုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ Windows 10 ကိုပထမတစ်ခုကနေနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာကို format လုပ်ရပါမယ်.
အရန်ကူးယူပြီးတာနဲ့ငါတို့လုပ်ရမည် update ကို tool ကို Microsoft က download လုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာထည့်လေ့မရှိနှင့် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။
Media Creation Tool installation tool ကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတာနဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ run လိုက်ပါ။
လျှောက်လွှာကကျွန်တော်တို့ကိုပြပါလိမ့်မယ် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုဖြေ - ဒီကွန်ပျူတာကိုအခု Update လုပ်ပါ။ အခြား PC အတွက် Installation media (USB flash drive, DVD or ISO file) ဖန်တီးပါ။
installation မီဒီယာကိုဖန်တီးပါ။ ဤရွေးချယ်မှုမှတစ်ဆင့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆို Windows 10 ကိုတပ်ဆင်ရန် installation medium တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏ပါဝင်မှုအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရန်နှင့်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရွေးရမည့် option ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကို Windows 10 မှ Windows7သို့အဆင့်မြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းသည်အနည်းဆုံးလိုအပ်သည် Windows 8 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် 10 GB နေရာလွတ် ဆက်ပြီး install လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုအမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ အချိန်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအချိန်ယူပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့က chat ချင်သောဖိုင်များမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို Wizard ကမေးလိမ့်မည်။
ဖိုင်များတည်ရှိရာလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးသည်နှင့် installation လုပ်ငန်းစတင်မည်။ ၎င်းပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ Windows7ကွန်ပျူတာတွင် install လုပ်ထားပြီးသော application များထပ်မံရရှိလိမ့်မည်။ Installer ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ ငါတို့ install လုပ်ခဲ့သည့်တူညီသော version ကို download လုပ်လိမ့်မည် (32 or 64 bits) ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းတဲ့ installation လုပ်ပြီး 32-bit version ကိုမေ့သွားတယ်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် download လုပ်ရန်အတွက် Windows 10 ၏ 64-bit version ကိုရွေးပါအထူးသဖြင့်၎င်းသည်4GB ကျော် RAM ရှိလျှင်။
Windows 10 installation medium တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive တွင်အထူးသဖြင့် 8 GB လိုအပ်သည်။ installation ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့် wizard သည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသော drive ထဲတွင် unzip ပေးပါလိမ့်မည် ခြစ်ရာကနေနောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်လုပ်ဆောင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် installation media ကိုဖန်တီးပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားရပါမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာ၏ Boot တက်တန်ဖိုးများကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ BIOS ကနေတစ်ဆင့်ငါတို့သုံးချင်တဲ့ယူနစ်ကစတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကို Windows7မှ Windows 10 သို့မွမ်းမံပါက Windows ဗားရှင်းအသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်းဒိုး ၇ တွင်ရှိသောလိုင်စင်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး၎င်းသည် Windows7ကဲ့သို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်များ Microsoft ဆာဗာတွင်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်Windows 10 ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ဖိအားပေးခံရပါကကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်း၌လိုချင်သည့်အတိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းစွာတပ်ဆင်ထားပါက၊ ပရိုဂရမ်ကတောင်းဆိုသောအခါကျွန်ုပ်တို့ရှိ Windows7လိုင်စင်နံပါတ်ကိုထည့်ရမည်။ Windows 10 ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့၊ ချိန်ညှိချက်များ (Windows သော့ + i)> အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်လုံခြုံရေး> အသက်သွင်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သောစကားဝှက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိညာဘက်ကော်လံတွင်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တရားဝင်လိုင်စင်မဟုတ်ပါကယုတ္တိနည်း မိုက်ခရိုဆော့ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအခမဲ့အခွင့်အလမ်းကို အသုံးချ၍ မရပါ Windows7ကနေ Windows 10 ကိုအခမဲ့အခမဲ့ရယူလိုက်ပါ။
သင်၏အဖွဲ့သည်၎င်းတို့ကိုတွေ့ပြီး ၀ င်းဒိုး ၇ ကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းတို့ကိုလိုချင်ပါက Windows7နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်မလိုပါ။ သင်၏အသင်းကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်တည်ထောင်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ စျေးကွက်တွင်ကွဲပြားသောစျေးပေါသော laptop သို့မဟုတ် desktop ကွန်ပျူတာများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည် 200 လောက်ကနေကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များမှာကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်များကိုကြည့်ရှုရန်၊ အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးရန်၊
operating system ကိုပြောင်းလဲပစ်
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့အသုံးပြုသူတွေအနည်းဆုံးမေးတဲ့ option ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် Linux ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ option အကြောင်းပြောရင်ပေါ့။ User Interface သည်အပေါ် မူတည်၍ အလွန်ဆင်တူသည် distro ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တာကငါတို့ကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မယ် ကွဲပြားခြားနားသောအခြားနည်းလမ်းရှာဖွေပါ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့တွင် Linux အတွက်ဗားရှင်းမရှိလျှင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသော applications များ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » ၀ င်းဒိုး ၇ အတွက်ထောက်ခံမှုအဆုံးသတ်ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
Microsoft Office အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများ